Ezi foto zityhila iinkcukacha zikaMichelangelo's David | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifoto ezibonisa iinkcukacha zikaMichelangelo's David ukuze ubabaze nangakumbi
Kuya kufuneka ubekhona phambi kukaMichelangelo's David ukuze uqonde ukuba kutheni sijamelene omnye wemifanekiso eqingqiweyo eyaziwayo kunye nezobugcisa. Lo msebenzi wobugcisa ukususela kwixesha lokuzalwa kwakhona wagqitywa ngo-1504 xa uMichelangelo wayeneminyaka engama-29 kuphela ubudala.
Kude kube namhla, unyaka nonyaka 8 yezigidi zabantu Batyelele igalari yeAkhademi yaseFlorence ukuze bajonge ezona nkcukacha zibubuncwane bemifanekiso zimela uKumkani uDavide wase-Bhayibhile okomzuzwana ngaphambi kokujongana noGoliyati. Ngoku sineefoto ezimbalwa ezisondeleyo ezibolekisa ukubonisa iinkcukacha zalo msebenzi mkhulu.
UDavid ngu Imifanekiso emarmore emhlophe emhlophe eyi-5,17 ukuphakama kunye nama-5572 eekhilogram ubunzima. Yenziwe nguMichelangelo Buonarroti phakathi kwe-1501 ne-1505 egunyaziswe yi-Opera del Duomo yeCathedral yaseSanta María del Fiore eFlorence.
Yiyo bobugcisa boKuvuselelwa ngokwababhali bembali kunye nomnye wemifanekiso eqingqiweyo eyaziwayo ehlabathini. Imifanekiso eqingqiweyo uMichelangelo aqala ukuyikrola kwibhloko enye yemabhile emhlophe.
Umfanekiso oqingqiweyo othi ime kakuhle umgama, kodwa ukuba umntu uyeza ukuqonda iinkcukacha, unokumangaliswa luphononongo ngokwalo lomntu.
YayinguMichelangelo ngokwakhe wayenala mazwi Malunga nomsebenzi wakhe:
Ukuba abantu Ndiyayazi indlela endisebenza nzima ngayo Ukwenza obu buchule bokwenza imifanekiso eqingqiweyo, oku ngekhe kubonakale kumangalisa kangaka.
Michelangelo wasweleka ngo-1564 eneminyaka engama-88 ubudalaKodwa iya kuba ngumfanekiso wakhe kaDavide oya kuhlala ngonaphakade. UMichelangelo owayedinga imizobo, imizobo kunye neemodeli ezincinci ze-wax okanye i-terracotta, ukuzisa ezo zifundo zokuqala ukuba zisebenze kwi-marble, ngaphandle kokwenza umfuziselo opheleleyo wokulinganisa, njengabanye amagcisa elo xesha.
Ngomnye wale misebenzi ekufuneka uyizamile ndwendwela kanye ebomini kweyodwa ukuba ubugcisa yenye yeenkanuko zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iifoto ezibonisa iinkcukacha zikaMichelangelo's David ukuze ubabaze nangakumbi
Iiprofayili ze-Instagram eziza kukhuthaza ubuchule bakho